Oovimba abagcina iimpepha zokugcina
I-Dogecoin iwile kwiNgingqi ethengiswa kakhulu kwi-0.21 yeedola, i-Uptrend enokwenzeka
25 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 25 Novemba 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15
I-DOGE / i-USD yexesha elide: Ukuthwala
IDogecoin's (DOGE) ixabiso likwintshukumo ehlayo. I-cryptocurrency yawela kwi-$ 0.21 ephantsi ukususela ngoNovemba 18. Kwiveki edlulileyo, i-altcoin idibanise ngaphezu kwenkxaso ye-0.21 ye-$. Inkxaso ye-0.21 ye-$ yayiyi-low yangaphambili ye-Oktobha 27. Ukususela ngo-Oktobha 1, inkxaso yangoku ayizange iphulwe. Mhlawumbi, i-uptrend iya kuqalisa kwakhona ukuba inkxaso yangoku ibambe.
IDOGE / iUSD-Itshathi yemihla ngemihla
I-Dogecoin ine-bearish crossover. Oko kukuthi, umgca we-21 weentsuku ze-SMA uwela ngaphantsi kwe-50-day SMA ebonisa uphawu lokuthengisa. I-DOGE ikwinqanaba le-39 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-crypto isathengisa kwindawo ye-bearish.
I-DOGE / i-USD phakathi kwexesha eliphakathi: Ukuthwala
Ixabiso le-DOGE likwinyathelo elihlayo. Iwa ukuphinda ibuyele kwi-low yangaphambili kwi-0.22 yeedola. Okwangoku, ngo-Oktobha 31 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci yokwandisa okanye inqanaba le-$ 0.229.
I-Dogecoin ingaphantsi kwe-20% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ikwimo ye-bearish kodwa i-DOGE ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Abathengi kulindeleke ukuba batyhale phezulu.
Imbonakalo Jikelele yeDogecoin
Kwiveki ephelileyo, i-Dogecoin idibanise ngaphezu kwenkxaso ye-0.21 yeedola. I-cryptocurrency inokuthi iqalise kwakhona ukuya phezulu ukuba inkxaso yangoku ibambe.
tags DOGE, UMHLA / i-USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Dogecoin (i-DOGE) Isondela kwi-$ 0.22 ephantsi njengeeBhere zigqithise iinkunzi
18 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 18 Novemba 2021
I-Dogecoin (i-DOGE) ngoku ijonge ezantsi. Ixabiso le-DOGE liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo njengoko ixabiso lifikelele kwi-dollar ephantsi ye-0.22 kwaye lihlehliselwe umva. I-downtrend yangoku ibangelwa ukungaphumeleli kweenkunzi zeenkomo ukugcina amaxabiso ngaphezu kwe-$ 0.30 kunye ne-$ 0.34 amanqanaba exabiso. Okwangoku uxinzelelo lokuthengisa luye lwancipha njengoko i-Dogecoin isondela kwi-low yangaphambili.
ixabiso DOGE uwile kwinqanaba 40 of Relative Amandla Index ixesha 14. DOGE / USD kwindawo downtrend kwaye ngaphantsi centerline 50. I cryptocurrency ekwaziyo ukuwa phantsi. Ixabiso le-crypto lingaphantsi komgca we-50 weentsuku ze-SMA kunye nomgca weentsuku ezingama-21 ze-SMA ebonisa ukuhla.
Ixabiso le-DOGE liwele ngaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. I-avareji ezihambayo zithambeka emazantsi ebonisa ukuhla. Abathengi banokuvela banyuse amaxabiso phezulu.
I-DOGE / i-USD iwile kummandla ogqithisiweyo. Uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla. Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-$ 0.229.
I-Dogecoin Dips njenge-Binance icela abasebenzisi ukuba babuyisele iithokheni ze-DOGE eziBonelwe ngokungafanelekanga emva koHlaziyo lweNethiwekhi
Ukulandela uhlaziyo lwamva nje kwi I-Dogecoin (i-DOGE) womnatha, uBinance uye wabika eminye imiba edityaniswe nengqekembe yememe. Ngokweengxelo zamva nje, i-behemoth crypto exchange icele abanye abathengi ukuba babuyisele iithokheni ze-DOGE eziphinde zavela emva kweminyaka yokubambeka.
I-Dogecoin yabona uhlaziyo lwe-1.14.5 yayo ekuqaleni kweli veki, ejolise ekusombululeni imiba ethile yokhuseleko ecinezelayo, ukunciphisa iindleko zokuthengiselana, kunye nokuphucula amava omsebenzisi jikelele kwinethiwekhi. Akumangalisi ukuba, uhlaziyo lufumene inkxaso enkulu kumxhasi owaziwayo we-DOGE- uElon Musk.
Nangona kunjalo, uhlaziyo-lukholelwa ukuba luphumelele-lubangele iingxaki kuBinance njengoko inkampani yabhengeza ukuba ifumene. "Umcimbi omncinci wokurhoxiswa kwenethiwekhi ye-DOGE." Ngenxa yale ngxaki, utshintshiselwano lwe-crypto lwanqumamisa okwethutyana ukurhoxiswa kwe-DOGE kwiqonga layo kwaye yafikelela kubaphuhlisi be-DOGE ukunceda ukusombulula lo mba.
Abasebenzisi abaninzi be-Binance bakhukula kumajelo asekuhlaleni, ngakumbi i-Twitter, namhlanje ukukhalaza malunga nememo abayifumana kutshintshiselwano. Utshintshiselwano lwe-behemoth lucele abasebenzisi abafumene iithokheni ze-DOGE ezilahlekileyo ngaphambili ukuba bazibuyisele.
Ukuphawula ngalo mbandela, umhlalutyi odumileyo waseTshayina we-crypto uColin 'Blockchain' UWu uxele ukuba uninzi lwentengiselwano engaphumelelanga ukusuka kwiminyaka eyadlulayo idlulile, okuthetha ukuba abanye abasebenzisi bafumene iithokheni ezingacelwanga.
Amanqanaba eDogecoin aphambili ekufuneka uwabukele —ngoNovemba 12
I-DOGE iwele kwi-bearish momentum ngokubhekiselele kwi-$ 0.2400 uphawu, njengoko imarike ebanzi yafumana ukulungiswa okubalulekileyo namhlanje ekuseni. I-cryptocurrency yeshumi ngobukhulu yaphuka ngaphantsi kwe-0.2600 yenkxaso ye-$ kutshanje, ilandela ukuhlanganiswa okuncinci ngaphezu kwelo nqanaba.
DOGEUSD- Itshathi yeeyure ezi-4
Oko kwathiwa, le ntshukumo ye-bearish yangaphambili-engalindelekanga inokuqhubeka njengoko singena ngempelaveki, kunye neebhere ezilindele i-$ 0.2400 ephantsi. Ukuze iinkunzi zenkomo zithintele ukudipha ukuya kwindawo ephantsi ekhankanywe ngaphambili, kufuneka batsale into engenakwenzeka kwaye batyhale ixabiso kwindawo ebalulekileyo ye-$ 0.2700 - $ 0.2750 pivot zone.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.2600, i-$ 0.2700, kunye ne-$ 0.2750, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 02500, i-$ 0.2400 kunye ne-$ 0.2300.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.80 zezigidi
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 33.8 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.21%
Inqanaba lentengiso: #10
tags Cryptocurrency, DOGE, I-DOGECOIN, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
Ngaba uShiba Inu (SHIB) uya kuze afikelele kwi-1 yeesenti okanye nakwi-$1?
Lilizwe leDoge-Eat-Doge Phandle
IShiba Inu yingqekembe yememe yamva nje. Abanini bayo bathembisa ukuba iya kukwenza usozigidi ngobusuku.
Kwaye banobungqina bokuxhasa amabango abo.
Ngo-Agasti, umnini we-Shiba uchithe i-$ 3,400 kwi-meme coin. Ngoku ixabisa i-1.5 yeebhiliyoni zeedola.
Uchukumisekile nangoku? Ukuba akunjalo, qwalasela enye ingqekembe yenja.
Lo uthenge i-8,000 yeedola ngo-Agasti. Ngoku ixabisa i-5.7 yeebhiliyoni zeedola. Kwabo babalayo, yi-8,000 yeedola ukuya kwi-5.7 yeebhiliyoni zeedola malunga neentsuku ezingama-400.
Abanye bayibiza ngokuba "lolona rhwebo lubalaseleyo."
UShiba uye watsiba i-dogecoin ukuze abe yeyona crypto ixabisekileyo kwihlabathi.
Ngokucacileyo, oko akusiyo uphawu lokuthenga.
Ke kutheni uShiba empompa? Ewe, ngaphandle kwento yokuba uninzi luhlala luthenga okuluhlaza kwaye luthengisa obomvu…
I-Crypto whales zisebenzisa i-meme zemali njenge-gauge yokuba yimalini emitsha - kunye ne-unsophisticated - imali ihamba kwiimarike ze-crypto. Kwaye ke benza konke abanako ukuthabatha loo mali kubo.
(I-Anecdotal, kodwa phantse wonke umntu endikhe ndathetha naye osandula kungena kwi-crypto waqala ngengqekembe yenja.)
Ngale ntsasa, ngokukhaba, ndibuze umlindi we-crypto whale uJustin Gupta we-CryptoDash.live ukuba ucinga ntoni ngeShiba.
"I-Cryptocurrencies iyaguquguquka njengoko injalo," utshilo uJustin. Kodwa xa zingasasazwanga kakuhle, kwaye bambalwa kuphela abalawula inxalenye enkulu yamathokheni, baba ngakumbi. Oku kungenxa yokuba aba bantu bambalwa banokuhambisa intengiso ngokuthanda kwabo. ”
Kwimeko kaShiba, uJustin wachaza, phantse i-1/5 yempahla ilawulwa ziingxelo ezimbini: “Intsingiselo yawo nangawuphi na umzuzu, ukuba ezi akhawunti zigqiba kwelokuba zilahlwe, zinokubangela ukuthengiswa okukhulu koloyiko zize zitshabalalise i-asethi. ”
Isinye kwisihlanu seShiba sibanjwe ngama-akhawunti ama-2
Thelekisa oko kwi-Dogecoin, apho ii-akhawunti ezimbini eziphezulu zibamba i-10% yokunikezelwa okujikelezayo.
Inyani yemalike ye-crypto yangoku kukuba akukho mntu uyikhathaleleyo itekhnoloji okanye i-tokenomics. Cinga, kwiinyanga ezidlulileyo uShiba upompe i-300% emva kokuba u-Elon Musk ebhale kwi-tweet ukuba uza kufumana inja ye-Shiba Inu.
Kwaye kwiliso elingaqeqeshwanga, uShiba ubonakala ephantsi.
Ngoku ihleli kwi-0.00007253 yeedola.
Kodwa, i-market cap yi-$ 40 yezigidigidi, inkulu kuneRobinhood. Inkulu kuneSysco Corp., eyona nkampani inkulu yokuhambisa ukutya eMelika. (Kwaye unikezelo lwayo olujikelezayo lujikeleze i-550 yezigidigidi.)
Ukuba uthenga eShiba namhlanje kungenxa yokuba uqinisekile ukuba iya kwi-1 cent. Mhlawumbi ne-$1. Ndiza kukuxelela ngoku. Ayizukwenzeka.
Ewe, oku kukhomba imali entsha ezayo kule ndawo. Kodwa ngokucacileyo kukho ezinye izinto eziqhuba le mania. Ngamanye amaxesha ezi zinto zibonakaliswa ngcono ngeememes:
URichard Burton, umyili weeprojekthi zeDeFi, uye wavelisa inqaku elibalulekileyo elifumana ingqwalasela encinci kuneeshicileli zemali: imiqobo ekungeneni kwimali yemveli.
U-Shiba Inu, wabhala, "yinto eyenzekayo xa uyeka izizukulwana zabantu baseMelika ekutyaleni imali kwi-startups ngeMithetho yabaTyali-mali eVunyiweyo eyenzelwe 'ukukhusela abantu.'
Mhlawumbi imiqobo esezantsi yokungena ithetha ukuba sidala abatyali-mali abanolwazi. Okanye… njengakwimeko yazo zonke iimali zememe kunye nezitokhwe… mhlawumbi akunjalo.
NB: I-Shiba Inu ayikho i-bitcoin elandelayo. Okunokwenzeka ngakumbi, iya kuba apho uninzi lwabasanda kuzalwa lukhutshelwa khona. Ukuba ujonge ingcebiso eqinileyo kwiiprojekthi ezifanele imali oyisebenzele nzima, ungajongi okunye
Umbhali: Chris Campbell
kuba Imfihlo kaAltucher
tags I-SHIB, SHIBA INU, SHIBUSD
I-Dogecoin (i-DOGE) iRhweba ngokuPhakathi njengoko ifumana inkxaso ngaphezu kwe-0.24 yeedola
11 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 11 Novemba 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.45, i-$ 0.46, i-$ 0.47
I-DOGE / i-USD yexesha elide iTrage: Bullish
namhlanje, IDogecoin's (DOGE) ixabiso iqalisa intshukumo phezulu emva kokufumana inkxaso ngasentla $ 0.24. Ukuba iibhere ziye zaphula inkxaso $ 0.24, altcoin wayeza kuncipha ngakumbi ukuba $0.19. I-Dogecoin ithengisa kwi-0.26 yeedola ngexesha lokubhala. Abathengi banomsebenzi wokunyuka ukugcina ixabiso le-DOGE ngaphezu kwe-0.30 ye-$ kunye ne-$ 0.34 yamanqanaba exabiso. Kwinqanaba lexabiso langaphambili, i-Dogecoin yachithwa kwi-$ 0.34. Kwi-upside, ukuba i-DOGE / i-USD iphula ukuchasana kwi-$ 0.34, imarike iya kunyuka i-$ 0.42.
Ixabiso le-DOGE liwele kwinqanaba le-50 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Oku kuthetha ukuba kukho ukulingana phakathi koNikezo kunye nemfuno. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwe-50-day line SMA kodwa ngaphantsi kwe-21-day line SMA. I-DOGE inokunyanzeliswa ukuba ihambe kwi-range-bonding move
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE linyuka emva kwe-rally ethe nkqo. Okwangoku, ngo-Oktobha 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.23.
DOGE / USD-4 Itshathi yeYure
I-Dogecoin ingaphezulu kwe-25% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-avareji ezihambayo zityibilika ngokuthe tye ebonisa intshukumo esecaleni. Abathengi banokuvela banyuse amaxabiso phezulu.
I-cryptocurrency izama ukuphinda iqhubele phambili ukuya phezulu ukuze iphinde ibuyele phezulu. I-uptrend inokujongana nokumelana ne-$ 0.30 kunye ne-$ 0.34. I-Dogecoin inyanzelekile ukuba ihambe kwi-range-bound.
Dogecoin Breaks Critical $0.2750 Zone Ukulandela Core Upgrade Isibhengezo
8 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 8 Novemba 2021
Iqela elisanda kuhlanganiswa labaphuhlisi ngasemva I-Dogecoin (i-DOGE) baye babhengeza ukuba i-Dogecoin Core 1.14.5 yokuphucula, eyenza ukunciphisa umrhumo ngokukhawuleza kwinethiwekhi, isondele ekugqityweni. Iqela, elinesibambo @dogecoin_devs, libhale kuTwitter izolo ukuba:
"I-Dogecoin Core 1.14.5 ithegiwe ("ihambile igolide," kodwa kumthombo ovulekileyo), kwaye siqhuba inkqubo yokwakhiwa kweGitian ngoku. Akwenziwanga de siqinisekise ukuba ulwakhiwo lulungile, kodwa sooooon. ”
Nje ukuba uphuculo luqhubeke, iifizi ezicetyiswayo zokubandakanywa kwebhloko ziya kulungiswa kwi-0.01 DOGE (malunga ne-$ 0.002) nge-KB kwi-wallet engundoqo.
Ngelixa uthungelwano luxhase imirhumo ephantsi ukususela kuguqulelo 1.14.4, inguqulelo entsha iya kwenza ukuba imirhumo ephantsi yentengiselwano ibe yinto engagqibekanga, ngaloo ndlela iyalela izipaji zomntu wesithathu ezifana ne-Eksodus kunye neLedger ukuba zixhase iintengiselwano ezingabizi kakhulu.
Ngeli xesha, i-CEO yeBillionaire u-Elon Musk ucele ukuncitshiswa kweemali zokuthengiselana kwe-DOGE ngamaxesha amaninzi. UMusk wathi ukuphuculwa okunjalo kuya kunceda i-Dogecoin ibe yindlela efanelekileyo yokuhlawula. I-CEO yeTesla kunye ne-SpaceX yathumela kwi-tweet ngaxa lithile ngoSeptemba ukuba:
"Kubaluleke kakhulu ukuba imali ye-Doge ihle ukuze yenze izinto ezinjengokuthenga i-movie i-tix esebenzayo."
Oko kwathiwa, isindululo sokunciphisa umrhumo kwafuneka siqokelele inkxaso phakathi koluntu, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-DOGE yimali ye-cryptocurrency.
Okwangoku, ukuphuculwa okuzayo akunciphisi kuphela iindleko zentengiselwano kodwa kubonelela ngolungiso kwiibhugi ezininzi ezinobunzima obuchaphazela abasebenzisi abaninzi beDogecoin Core.
Amanqanaba eDogecoin aphambili ekufuneka uwabukele —ngoNovemba 8
I-DOGE ifumene umfutho ophucukileyo we-bullish emva kwekhefu eliqinisekileyo elingaphezu kwenqanaba elibalulekileyo le-pivot ye- $ 0.2750. Ingqekembe ye-meme isondele kufutshane ne-0.3000 yexabiso elijikelezayo kodwa ayiphumelelanga ukukala ngasentla kulandela ulungiso olubanzi lwemarike.
I-DOGEUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Oko kwathiwa, i-cryptocurrency yesithoba inkulu ngoku ibambe i-bias ebalulekileyo njengoko isalathisi se-MACD seeyure ezi-4 ekugqibeleni siphuma kwiimeko ze-bearish. Ngaloo nto, ndilindele ukuqhubeka kwe-bullish kwi-0.3000 yeedola kwaye, emva koko, i-$ 0.3250 yokuchasana kwiintsuku ezizayo. Nangona kunjalo, ikhefu elingalindelekanga kwindawo ye-0.2750 yeedola inokumisa ukubuyiswa kwe-bullish kule cryptocurrency.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.2900, i-$ 0.3000, kunye ne-$ 0.3100, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 02800, i-$ 0.2750 kunye ne-$ 0.2700.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.86 zezigidi
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 37.3 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.30%
Inqanaba lentengiso: #9
I-Dogecoin (i-DOGE) iyancipha kwi-Downside, iphinda ibuyele kwiNqanaba lokuPhuphuka kwi-$ 0.23
4 Novemba 2021 | Ukuhlaziywa: 4 Novemba 2021
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15
Ukusukela nge-29 ka-Okthobha, IDogecoin's (DOGE) ixabiso iye intshukumo ezantsi. Ngo-Oktobha 28, i-cryptocurrency yayikwi-rally ethe nkqo njengoko ifikelele phezulu kwi-0.34 yeedola. Ixabiso le-DOGE lachaswa njengoko i-altcoin ivavanya indawo yokuchasana yangaphambili kwi-0.34 yeedola. Imarike inqabile ukuya kwi-$ 0.26 ephantsi okanye ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ze-21. I-Dogecoin iya kuhla ngakumbi kwi-downside ukuba la manqanaba aphulwa. Kwelinye icala, ukuba i-SMA yosuku lwe-21 ibambe, abathengi baya kubuyisela ngaphezulu kwenkxaso yangoku kwaye baphinde baqale ngokutsha.
Ixabiso le-DOGE liwele kwinqanaba le-52 le-Relative Strength Index ixesha 14. Nangona i-retracement, i-altcoin ithengisa kwi-bullish trend kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo kwaye iphinda iphinde i-21- usuku lwenkxaso ye-SMA. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqalise ukuba ixabiso liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE likwintshukumo esezantsi. Iphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Kukho ithuba lokuba ixabiso lifikelele kwixabiso eliphantsi langaphambili. Okwangoku, ngo-Oktobha 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOGE liya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-$ 0.23.
Imarike iwele ngaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-Dogecoin iwele kwindawo ethengisiweyo yentengiso. Intsingiselo kukuba i-downtrend yangoku ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Imakethi kusenokwenzeka ukuba iphinde iqalise ukunyuka. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
I-Dogecoin ikwintshukumo ezantsi. I-cryptocurrency inokuthi iphinde ibuyele kwi-breakout yangaphambili ye-0.23 yeedola. Oku kuye kwaqinisekiswa kwinqanaba le-2.0 lokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-$ 0.23.
I-Dogecoin (i-Doge) ikwi-Rally ethe nkqo, i-Upside engaphezulu ayinakwenzeka
28 October 2021 | Ukuhlaziywa: 31 October 2021
IDogecoin's (DOGE) ixabiso liye lavuka ngaphezu kwenkxaso ye-$ 0.22. I-rebound iphuke ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. I-rally ethe nkqo iphule amanqanaba angaphambili okumelana. Ukunyuka kwangoku kwe-bullish kwandiswe kwixabiso langaphambili le-0.34 ephezulu. Ixabiso le-DOGE liphinda livavanya i-0.34 yeedola ephezulu ukuze iqhekeze ngaphezulu kwayo. I-DOGE / i-USD iya kukhwela i-$ 0.40 ephezulu ukuba iinkunzi zeenkomo ziphula i-high yamva nje.
I-rally ethe nkqo ityhale ixabiso le-DOGE ukufikelela kwinqanaba le-71 le-Relative Strength Index yexesha le-14. Intsingiselo kukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe kakhulu. Okunye okungaphezulu kuyathandabuzeka njengoko abathengisi bevela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Ixabiso le-DOGE line-bullish crossover. Oko kukuthi, i-SMA yeentsuku ezingama-21 iwela ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-50.
I-DOGE / i-USD yexesha eliphakathi kwi-bias: Bullish
Kwitshathi yeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE likwi-rally ethe nkqo. Iinkunzi zenkomo zizama ukuphula ngaphezulu kokuchasana kwi-0.34 yeedola. Okwangoku, ngo-Oktobha 28 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-$ 0.39.
I-DOGE ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-Stochastic ibonise ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe ngokugqithisileyo. I-avareji ezihambayo zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-Dogecoin ikwi-uptrend eyomeleleyo. I-rally yangoku iya kujongana nokukhatywa kwi-0.34 yeedola eziphezulu. Ukuba abathengi baphula ukuchasana kwangoku, imarike iya kukhwela i-$ 0.40 ephezulu. Uqikelelo lwexabiso le-Dogecoin ngo-2022 Ucazululo oluneenkcukacha lulapha.
I-Dogecoin Rally njenge-Elon Musk Pumps kwiNtengiso kunye ne "People's Crypto" Rhetoric
25 October 2021 | Ukuhlaziywa: 25 October 2021
I-Dogecoin (i-DOGE) urekhode i-spike ebalulekileyo ngaphezulu kwe-0.280 yeedola ngokulandela uthotho lweetweets ezivela ku-Elon Musk, osanda kuchaza ingqekembe yememe njenge. "I-crypto yabantu."
Ukuphendula kwinqaku elivela kwi-Benzinga eqaphela ukuba omnye kwabathathu base-US abaphethe i-crypto baphathi be-DOGE, u-Musk wathumela i-tweeter ukuba abaninzi abasebenzi be-Tesla kunye ne-SpaceX yomgca wokuvelisa i-DOGE. Umphathi weTesla ubhale kuTwitter ukuba:
“Abayizo iingcali zezimali okanye itekhnoloji yaseSilicon Valley.
Yiyo loo nto ndigqibe kwelokuba ndimxhase uDoge – kwavakala ngathi yi-crypto yabantu.”
Ngaphambi kwe-tweet ye-Musk, i-Dogecoin ibonise isenzo esihle sexabiso.
U-Musk waqala waphinda wathi ubambe kuphela i-Bitcoin (BTC), i-Ethereum (ETH), kunye ne-Dogecoin. Kungekudala emva kwe-tweet, i-DOGE/USD irekhode i-5% spike ngaphambi kokuwa kwinqanaba layo langaphambili.
Okwangoku, abanikazi be-Shiba Inu (SHIB) bahamba emva kwe-CEO ye-billionaire ngokuhlaselwa okubonwayo kwithokheni yabo, eyehla ngaphezu kwe-10% emva kokuba u-Musk ethe wayengenabani.
Ngaphambili ngoku, i-DOGE izabalazile ukurekhoda nayiphi na inkqubela ye-bullish enentsingiselo ngaphandle kweenzuzo ezinkulu ze-cryptos kunye nee-meme zemali. Nangona kunjalo, ingqekembe ye-meme ye-flagship okwangoku ineyona nzuzo ininzi ye-intraday phakathi kwe-cryptocurrencies ezilishumi eziphezulu.
Okubangela umdla kukuba, ngelixa uMusk ethetha nge-DOGE njenge "I-crypto yabantu," izipaji ezingamashumi amabini zibamba ngaphezulu kwe-50% yonikezelo lwe-DOGE lulonke. Okuthakazelisayo ngakumbi, i-wallet enye i-akhawunti ye-36,711,947,722 DOGE, i-27.8% yokunikezelwa kwayo yonke.
Amanqanaba aphambili eDogecoin ukuba abukele-Okthobha 25
I-DOGE irekhode ukubuyiswa okubukhali kumgca we-$ 0.280 ngokufutshane kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ngaphambi kokucima ininzi yeenzuzo zayo kunye nokuhla ngokubhekiselele kwi-0.260 yenkxaso. Ndilindele ukuba i-meme coin ithumele i-rebound eqhubekayo kwi-$ 0.270 ukuchasana okubalulekileyo kwiiyure ezizayo kunye nokuhlaziywa okunokwenzeka kwe-0.280 yeeveki ezintandathu eziphezulu.
Iimeko zokurhweba kunye nomthamo uhlala kwisiphelo esisezantsi enika indawo yesithoba enkulu ye-cryptocurrency indawo eyaneleyo yokurekhoda inzuzo yexabiso elingaphezulu.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.270, i- $ 0.280, kunye ne- $ 0.290, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.250, $ 0.240, kunye ne- $ 0.230.
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 34.8 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.33%
tags Cryptocurrency, DOGE, I-DOGECOIN, U-ELON MUSK, iindaba, Uhlalutyo lobuGcisa
IDogecoin (DOGE) Ukunyuka okuPhezulu kugxilwe apha ngezantsi kwe- $ 0.27 Resistance, ngoMeyi ungaQhubeka phezulu
21 October 2021 | Ukuhlaziywa: 21 October 2021
Inqanaba lenkxaso engundoqos: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15
IDogecoin's (DOGE) Ixabiso liphukile ngaphezulu komndilili oshukumayo njengoko i-altcoin yahlanganisana kwindawo yokumelana ne- $ 0.28. Ngo-Okthobha u-6 uptrend, iinkunzi zeenkomo zazichaswa kwi-0.27 ephezulu yeedola. U-Dogecoin wenqabile ukuya kwi-0.22 yeedola ezisezantsi kwaye waphinda waqalisa ngokutsha. Namhlanje, iinkunzi zeenkomo ziphinda zilinge inqanaba lokumelana nokuzophula ngaphezulu kwayo. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-6 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola i-0.38.
I-DOGE ikwinqanaba lama-58 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-altcoin ikwindawo yokuqhubela phambili kwaye inakho ukunyukela phezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-DOGE likwi-uptrend. Ixabiso liphuliwe ngaphezulu komndilili wokuhamba kodwa ujongene nokwaliwa kumda wokumelana ne- $ 0.27. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-18 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola 0.34.
Ixabiso le-DOGE lingaphezulu komndilili oshukumisayo kodwa i-uptrend iye yamiswa. I-DOGE ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho kodwa imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwe-21-day SMA. Umndilili oshukumayo uthambele phezulu ukubonisa uptrend
I-Dogecoin ikwi-uptrend. I-uptrend yangoku igxunyekwe ngezantsi kwenqanaba lokumelana ne- $ 0.27. I-cryptocurrency iya ku-rally ukuya kwi-0.34 yeedola ukuba ukuxhatshazwa kwangoku kuphuliwe. Umfutho wokunyuka uya kunyuka uye kuthi ga kwi-0.38 yeedola ephezulu.
← Entsha izithuba1 2 ... 6 abaDala izithuba →